ဒါခေါ် '' CAVERNOUS PUSSY စွမ်းအင် '' ၏တစ် ဦး ကယူ -DOWN: မိန်းကလေးများလည်းကြီးမားတဲ့ဒစ်စွမ်းအင်ရှိနိုင်ပါသည် - သတင်း
ဒါခေါ် '' cavernous pussy စွမ်းအင် '' ၏တစ် ဦး ကယူ -Down: မိန်းကလေးများလည်းကြီးမားတဲ့ဒစ်စွမ်းအင်ရှိနိုင်ပါသည်
ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဂါးဒီးယန်းသတင်းစာပါ ၀ င်သည့်“ မင်းသမီး” ဟူသောဝေါဟာရကို၎င်း၏စာမျက်နှာများမှပိတ်ပင်ထားပြီး၊ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးနှစ်မျိုးလုံးအတွက် 'သရုပ်ဆောင်' ကိုအသုံးပြုခြင်းအပြင် 'စီမံခန့်ခွဲမှု'၊ 'အမျိုးသမီးဆရာဝန်' စသည့်ဝေါဟာရများကိုတဖြည်းဖြည်းတိုက်စားခြင်း၊ 'သူနာပြုအထီး' သည်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုဖြတ်ပြီးထိမိသွားသည် နာမည်ကြီးဆောင်းပါး 'ကြီးမားသောဒစ်စွမ်းအင်' (သို့မဟုတ် BDE) အစားအသုံးပြုမည့် 'Cavernous Pussy Energy' ဟူသောစကားစုကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
တစ် ဦး ကအလွန်ယုံကြည်စိတ်ချရသောအရင်းအမြစ်
BDE ဆိုတဲ့ဝေါဟာရကိုကျွန်တော်ပထမဆုံးရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့စဉ်ကမာနထောင်လွှားလာခြင်းမရှိဘဲနှစ် ဦး လုံးရဲ့ယုံကြည်မှုအယူအဆကိုဖုံးကွယ်ထားသည့်ဝေါဟာရကိုနောက်ဆုံးတွင်တွေ့ရှိခဲ့ရသည့်အတွက်အလွန်ကျေနပ်အားရခဲ့သည်။ BDE သည်တော်လှန်ရေးသမားတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာကျား၊ မမခွဲခြားဘဲလူအားလုံးအတွက်အသုံးအနှုန်းဖြစ်သည်။
BDE သည်သင်၏လိင်တံအရွယ်အစားနှင့်မသက်ဆိုင်သကဲ့သို့၎င်းသည် dong ရှိရန်တောင်မလိုအပ်ပါ။ သူတို့ကိုယ်သူတို့ကျောထောက်နောက်ခံပြုသူနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်သူတစ် ဦး ဖြစ်ခြင်းအကြားမျှတမှုကိုရရှိထားသူမည်သူမဆို BDE ရှိသည်။
အကယ်၍ 'အမျိုးသမီးဆရာဝန်' ဟူသောဝေါဟာရသည်သင့်ကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေမည်ဆိုလျှင် 'cavernous pussy energy' ကိုသင်၏ဝေါဟာရထဲ၌ထည့်ခွင့်ပြုခြင်းသည်ဟန်ဆောင်ခြင်းနှင့်အလိုလိုသိခြင်း မှလွဲ၍ အခြားအရာတစ်ခုမဟုတ်ပါ။
တစ် ဦး က smize ဒါကြောင့် BDEometer ချိုးဖဲ့နိုင်အောင်ခိုင်မာတဲ့
Cavernous Pussy စွမ်းအင်ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။
ဆောင်းပါးသည်သင်၏ဖန်သားပြင်ပေါ်သို့ပထမဆုံးအကြိမ်ရောက်ရှိချိန် မှစ၍ သင်၏ပါးစပ်မှမလွှဲမရှောင်သာသက်ပြင်းချလိမ့်မည်။ ပုံမှာပြထားတဲ့ပုံက pin-up စတိုင်ရိုက်ချက်ဖြစ်ပြီးအမျိုးသမီးတွေဟာစုံလင်တဲ့အိမ်ရှင်မအဖြစ်တင်စားခံရပြီးသူမခင်ပွန်းကိုလုံးလုံးလျားလျားလက်အောက်ခံနေရသောသူမ၏မိသားစုကိုအိမ်ပြန်လာရန်အတွက်အချိန်ကုန်ခံပြီးမေတ္တာဖြင့်ဖုတ်ရသည် ။ ဒီအမျိုးသမီးစွမ်းရည်မြှင့်အော်ဟစ်ပါသလား မထင်ပါဘူး
ဥပမာများ CPE ရှိခြင်းသည်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် - 'CPE နှင့် ပတ်သက်၍ သင်အများဆုံးကြောက်ရမည့်စိန်ခေါ်မှုများကိုကြိုဆိုရန်သင့်အားလှောင်ပြောင်သည်။ သင်ကြားခံမလိုအပ်သောကြောင့်သင်၏ယခင်မင်္ဂလာပွဲတွင်ရက်စွဲမရှိပဲပြသခြင်းကိုသင်နှစ်သက်သည်။ မိတ်ကပ်မ ၀ တ်ဘဲ၊ ဆံပင်ကိုရှုပ်ထွေးနေသော Bun တစ်ခုတွင်ပြသနေသည့်အတွက်ရက်စွဲတစ်ခုသည်သင်၏ရက်စွဲကိုမျက်ခုံးအသုံးမပြုရန်ဖိအားမပေးဘဲသင်၏နေရာသို့ပြန်သွားနိုင်သည်ကိုသိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ '
CPE သည်ဤနေရာတွင်သက်သေပြရန်အခွင့်အရေးရှိသော်လည်း၎င်း၏ကြိုးပမ်းမှုများသည်အချည်းနှီးမဖြစ်နိုင်ပါ။ ဤတွင်ဖော်ပြထားသောဥပမာနှစ်ခုစလုံးသည်အမျိုးသားများနှင့်သာသက်ဆိုင်သည်။ ဥပမာ - ရက်စွဲနှင့်နေ့စွဲ။ အမျိုးသားများပါ ၀ င်သည့်အခြေအနေများတွင် CPE သာရှိသည်ဟုဆိုလိုသည်။
ထို့အပြင်ရည်ညွှန်းထားသည့် 'စိန်ခေါ်မှုများ' သည်မင်္ဂလာဆောင်ခြင်း၊ တစ်ကိုယ်တော်ဝါသနာပါခြင်းနှင့်မိတ်ကပ်မဝတ်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ အိုးကောင်လေး၊ ငါတို့အမျိုးသမီးတွေအတွက်ခက်ခဲနေမှာမဟုတ်ဘူး။
ဟူသောဝေါဟာရကို 'Cavernous Pussy စွမ်းအင်' ကိုခွဲ။
ရွေးချယ်မှုဟူသောစကားလုံးအရ 'pussy' ဟူသောဝေါဟာရကိုထည့်သွင်းခြင်းသည် BDE နှင့်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ BDE သည်အထီးလိင်အင်္ဂါအရွယ်အစားအပေါ်တွင်မတည်ပါကအဘယ်ကြောင့်ဤအသုံးအနှုန်းတွင်အမျိုးသမီးနှင့်ညီမျှရမည်နည်း။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်အမျိုးသမီးတွေ BDE မရရှိနိုင်တဲ့သတင်းစကားတစ်ခုထွက်လာပါတယ်။ BDE လှုပ်ရှားမှုကိုယ်နှိုက်နဲ့လုံးဝဆန့်ကျင်ပြီး၎င်းသည်လိင်မခွဲခြားဘဲလူအားလုံးကိုဂုဏ်ပြုရန်ဖြစ်သည်။
သငျသညျ em, gorl ပြောပြပါ
'pussy' ဟူသောစကားလုံးကိုထပ်မံလေ့လာကြည့်လျှင်၊ Donald Trump ၏နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုနှင့်အမျိုးသမီးများအား pussy ၏ဖမ်းဆီးခြင်း (သို့) pussy ဖြစ်ခြင်းဟူသောအယူအဆကိုစဉ်းစားမိသည်၊ ၎င်းသည်အရည်ပျော်မှုသို့မဟုတ်စတီကျူးစ်ဖြစ်သည်။ 'Pussy' သည်ယနေ့လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင်တန်းတူညီမျှမှုသို့မဟုတ်စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေးကိုအော်ဟစ်သောစကားလုံးတစ်လုံးမျှမရှိပါ။
'cavernous' ဟူသောစကားလုံးအသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စတင်ခြင်းမပြုပါနှင့်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်ရွတ်ဆိုခြင်း၊ ကဗျာတစ်ပုဒ်ဖြစ်ခြင်းသို့မဟုတ်၎င်းအားလက်စွပ်တစ်ကွင်းသာပိုင်ဆိုင်ခြင်းအတွက်ဖြစ်ခဲ့လျှင်၎င်းသည်ထူးဆန်းသောစကားလုံးရွေးချယ်မှုကိုခွင့်ပြုရန်အကြောင်းပြချက်များဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်ဤကိစ္စသည်ရှင်းလင်းစွာမဟုတ်ပါ။
Cavernous သည်ကျယ်ပြန့်ခြင်း၊ မှောင်မိုက်ခြင်းနှင့်မှောင်မိုက်ခြင်းနှင့်ပင်အဓိပ္ပာယ်တူသဖြင့် BDE အသံအတွက်အမျိုးသမီးများအတွက်သင့်တော်သောအခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်ပိုင်ဆိုင်လိုသော attribute တစ်ခုဖြစ်သည်။ BDE သည်အတိုကောက်အနေနှင့်ရောအပြည့်ပါရှိသော်လည်း cavernous pussy စွမ်းအင်သည်ရှုပ်ထွေးစေသည့်အတိုင်းပါးစပ်ပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းကို 'အသားစား pussy စွမ်းအင်' အဖြစ်အလွယ်တကူနားလည်နိုင်သည်၊ ဤအချက်မှာတိုးတက်မှုဖြစ်နိုင်သည်။
သူတို့ရဲ့အတွင်းပိုင်း BDE ကိုဘယ်လိုရှာတွေ့နိုင်မလဲ။
သင်၏အတွင်းစိတ် BDE သည်သင်ကိုယ်တိုင်အခြားသူများကိုမည်သို့ထင်မြင်ပုံ၊ သင်၏အသွင်အပြင်၊ လိင်ဘဝ၊ ကြွယ်ဝမှု၊ ကြီးပြင်းလာမှု၊ သို့မဟုတ်သင်ပိုင်ဆိုင်သောမီးတောက်များသို့မဟုတ်ခေါင်းများစသည်ဖြင့်ပင်မိမိကိုယ်ကိုအတည်ပြုရန်ရှာဖွေခြင်းကိုရပ်တန့်သွားသည်နှင့်တပြိုင်နက်အမှန်တကယ်တွေ့ရှိခဲ့ရပြီ (တစ် ဦး လက္ခဏာသက်သေ Edinburgh လှည့်ကွက်ထည့်သွင်းရန်) ။ လူတွေကသင့်ကိုဘယ်လိုထင်သလဲ၊ သင့်ကိုယ်ပိုင်တန်ဖိုးကိုများများသိလေလေဂရုစိုက်လေလေသင့်အတွင်းပိုင်း BDE ကိုထုတ်လွှတ်လေလေဖြစ်သည်။
Rihanna သည်ဒစ်စွမ်းအင်ကိုစတင်တည်ထောင်သူဖြစ်သည်။ သူမသည်ကြီးမားတဲ့ဒစ်စွမ်းအင် IS! သူမ၏ fuck ဆိုတဲ့ဒစ်ခ်၏ပုံတိုင်းကသင့်အားကြီးမားသောဒစ်ခ်ျစွမ်းအင်ဖြင့်ရိုက်နှက်သည်။ ?? pic.twitter.com/czaaC1ctl4
- ဘုရားသခင်က Fenty ?? (@ILoveRobz) ဇွန်လ 27, 2018
ဒုတိယနှစ်နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးကျောင်းသား Elle အနေဖြင့် 'BDE သည်မိမိကိုယ်ကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာမရှိဘဲမိမိကိုယ်ကိုချစ်သည်' ဟုဒုတိယနှစ်မနုropဗေဒကျောင်းသား Lucy က 'လိင်တံကြီးတဲ့လူတွေကသိတယ်၊ သင်ကြီးမားတဲ့တင်စားထားတဲ့ဒစ်တစ်ခုရှိရင်အဲဒါကိုသင်ပိုင်ဆိုင်ပြီးအဲဒီလိုလမ်းလျှောက်ဖို့လိုတယ်။ မင်းတို့ရဲ့တန်ဖိုးကိုသိကြပါ။
ဘယ်လို tinder စကားပြောဆိုမှုရှိသည်ဖို့ဘယ်လို
CPE နှင့်မတူသည် BDE သည်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်မျက်နှာမပြေနိုင်လောက်အောင်ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိရုံထက်မကပါ။ အလုပ်အင်တာဗျူးတစ်ခု၊ တင်ဆက်မှုတစ်ခု၊ လူဆိုးဂိုဏ်းတစ်ခု၊ ဟော်ကီပွဲနှင့်ထိုသွေးထွက်သံယိုရက်စွဲများနှင့်ပတ်သက်သည့်အချက်အလက်များဖြစ်သည် , သငျသညျမခွဲခြားဘဲပေါ်တွင်သင် eyeliner ရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေ, သင်သည်ထိုသူအပေါင်းတို့ကိုသူဌေးကြောင်းကိုသိ။
ကောင်းစွာနှင့်အမှန်တကယ် activated BDE
BDE သည်အရွယ်အစားကြီးမားသောလူသားများရှိခြင်းသို့မဟုတ်သေးငယ်သောကလေးများရှိခြင်းအတွက်အလွန်အကျွံမလျော်ရခြင်းအတွက်မလုပ်ဆောင်နိုင်ပါ။ လိင်တံလုံးဝမလိုအပ်ပါ။ BDE သည်သင်၏လိင်နှင့်ဟော်မုန်းများအထက်တွင်ရှိနေပြီး၎င်းသည်သင်၏ aura နှင့်သင်ထုတ်လွှတ်သော sexy၊
ထိုကဲ့သို့သောအသုံးအနှုန်းကိုအသုံးပြုရန်လုံလောက်သောအရည်အချင်းပြည့်မီရန်အမျိုးသမီးများသည်သူတို့၏လိင်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများကိုရည်ညွှန်းခြင်းသို့မဟုတ် BDE နှင့်ပိုမိုနှစ်သက်သောအမျိုးသမီးများအတွက်ရွေးချယ်စရာရွေးချယ်စရာမလုပ်သင့်ပါ။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းကယုံကြည်မှုနဲ့စိတ်ဓာတ်ရေးရာအကြားချိန်ခွင်လျှာကိုရှာတွေ့ခဲ့သူတွေကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အရာဖြစ်တဲ့ BDE ရဲ့နောက်ကွယ်ကအယူအဆနဲ့အတွေးအခေါ်အားလုံးကိုထိခိုက်စေတယ်။
BDE သည်နေစရာနေရာကောင်းကောင်းရှိသည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးစားမှုမရှိသောမိန်းကလေးတစ် ဦး သည်မိမိကိုယ်ကိုသို့မဟုတ်သူမ၏သူငယ်ချင်းများကို cavernous pussy energy ရှိသည်ဟုမပြောသင့်ပါ။